Ny valin'ny fitsikerana ny orinasan'ny fikambanana dia toy izao:
Mizotra amin'ny mety ho mpiray tsikombakomba aorian'ny fandravana (Fizarana 45):
Na eo aza ny fanaparitahana orinasa iray, ireo mpiray tsikombakomba dia mijanona ho tandindomin-doza araka ny tokony ho izy avy any ivelany amin'ny asa rehetra nataon'izy ireo izay mety ho asan'ny orinasa isaky ny vita alohan'ny fandravana, mandra-pahatongan'ny fotoana namoahana ny fampandrenesana ampahibemaso ny fandravana.
Mety hisy mpiara-miasa na orinasa mivarotra izany. Tsy maintsy zaraina amin'ny Registrar of Firms koa izany ary amin'ny fotoana fisoratana anarana amin'ny fiarahamonina an-tserasera dia tsy maintsy tadiavina mazava ny olana mitovy amin'izany. Raha sendra misy ny orinasa misoratra anarana dia tsy maintsy zaraina amin'ny Gazetim-pokontany akaiky ihany koa izy io ary amin'ny taratasy fampiasa andavanandro iray farafahakeliny izay ametrahana ny fototry ny orinasa (Sek. 72). Raha tsy misy ny fampandrenesana misokatra momba ny fandravana, na eo aza izany, ny fananan'ny mpiray tsikombakomba aminy, izay tsy mahafaty na maty na notsaraina na nametra-pialana na nisotro ronono, dia tsy azon'ny asa atao aorian'ny daty nijanonany ho mpiara-miasa.
Mandrosoa amin'ny herin'ny mpiara-miombon'antoka amin'ny antony manosika ny fiorenanana (Sek. 47):
Aorian'ny fandravana ny orinasam-piaraha-miasa, ny herin'ny tsirairay amin'ireo mpiara-miasa aminy hamatotra ny orinasa, ary ny zon'ireo mpiara-miombon'antoka hafa sy ny fanoloran-tenan'ireo mpiara-miombon'antoka, dia miroso hatrany araka izay ilaina amin'ny antony roa voalaza etsy ambany:
a) Famaranana ny raharaham-pitsarana sy ny olana amin'ny orinasa, toy ny fanilihana ny fananana, fanekena ny vola tokony haloan'ny tompona kaonty sy ny fandoavana ny trosa fampindramam-bola et cetera; SY
b) Mba hamaranana ny fifanakalozana natomboka nefa mbola tsy feno tamin'ny fotoana nisarahana, ohatra ny fanaterana ny entana nangatahina talohan'ny fanaparitahana sy ny fandoavana izany.
Na izany na tsy izany, ny orinasa dia tsy voafatotry ny hetsika ataon'ny mpiara-miasa iray izay tafavoaka amin'ny tsy fahaleovan-tena.
Zon'ny mpiara-miasa manome alalana ny hiafarany (Sek. 46):
Amin'ny fanaparitahana orinasa iray dia samy mahay ny mpiara-miombon'antoka na ny solontenany ary manana ny fananan'ny orinasa ekena sy ampiasaina amin'ny fandoavana ny trosa sy ny adidin'ny orinasa, ary koa mba hampitana ny ambim-bava eo amin'ireo mpiara-miombon'antoka na ny maso ivoho araky ny voalazan'ny ny zon'izy ireo.
Adidy hizarana tombom-barotra ho an'ny tsirairay (Sec. 50):
Raha toa ka eo am-pamaranana ny asa vita ny orinasa noravana, dia mbola adidin'ny mpiara-miasa tsirairay avy ny tsy mahazo tombony manokana na manokana avy amin'ny fifanakalozana momba ny orinasa. Ny mpiray tsikombakomba amin'izany fomba izany dia tsy maintsy manoratra amin'ny orinasa ho an'ny tombony tsirairay notadiaviny ary tsy maintsy mizara izany amin'ny mpiara-miombon'antoka samihafa ihany koa. Ireo teny ireo dia azo adika miaraka antsipirian'ny fisoratana anarana amin'ny fiarahamonina amin'ny fotoana fisoratana anarana eo amin'ny fiaraha-monina.
5. Fiverenana ny premium (Sec. 51):
Raha misy mpiray tsikombakomba nandoa vola amin'ny fidirana amin'ny orinasa mandritra ny fotoana voafetra, ary potika ilay orinasa na simba be alohan'ny fotoana iverenany, dia amin'izany ny mpiara-miasa iray dia ho mendrika amin'ny famerenam-bola. refy ahazoana tombony ”ho an'ny fotoana tsy lany andro ankoatry ny antony nahatonga ny fisarahana:
a) Amin'ny fahafatesan'ny mpiray tsikombakomba aminy;
b) Ny fitondran-tena ratsy nataon'ny mpiray tsikombakomba izay nanaiky izany; na
(c) Amin'ny alalàn'ny fahatakarana ny isan'ny mpiara-miombon'antoka izay tsy misy fandaharana amin'ny famerenana ny sarany.
Fampiharana azo ampiharina: zavatra 4 ilain'ny mpitsabo vaovao momba ny fahasalamana vaovao
Aogositra 5, 2015
Maninona ianao no tokony hanakarama ireo consultant TXM ho an'ny famokarana mahomby
Jolay 17, 2015
Ahoana ny fomba hananganana orinasa mpanohana IT Melbourne